Derma Roller – Rocket Online Shopping
Home ShopBeautyDerma Roller
Categories: Beauty, Girls, Health.	Tags: Derma Roller, Facial, အရေးကြောင်း.
Derma Roller အကြောင်းလေးကို
ဆရာဝန်များ အရေပြားနဲ့ပတ်သတ်သော ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ညွှန့်ကြားချက်များ အတိုင်းပြု စုရေးသား ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Dermaroller ကို Derma Roller, Scientia Derma Roller လဲခေါ်ပါတယ်။ မျက်နှာမှာ ကရိယာသုံးတဲ့ ဆေးကုသနည်းတခုပါ။
Collagen (ကိုလာဂျင်) ကိုနိုးဆွပေးပြီး၊ Elastin (အလက်စတင်း) ထွက်စေအာင်လုပ်ဘို့ ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။
Scar Removal အမာရွတ်
Acne scar removal ဝက်ခြံအမာရွတ်
Stretch Mark အရေးအကြောင်း
Anti Ageingအသက်ရွယ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ အစဉ်းကြောင်း
Anti Wrinkle အကြောတွန့်တာ
Cellulite Treatment (ဆဲလူလိုက်)
Hair Restoration အမွှေးပြန်ပေါက်အောင်
Hyper Pigmentation Treatment အမှတ်ပျောက်အောင် တွေပါတယ်
transdermal drug delivery အရေပြားထဲ ဆေးပေး ကုသရာမှာလဲ သုံးတယ်
စသည့်အသားရေ ပြဿ နာကို ဖြေရှင်းပေးပြီး မိမိတို့နေ့စဉ် နေပူထဲ သွားလာလှုပ်ရှားနေရသောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အသားရည် ဆဲလ်ပေါင်းများ ဆုးံရှုံးပါစေပါတယ် ထိုအခါ ဆဲလ်အသစ်များကို အသစ်တဖန်ပြန်လည် ရှင်သန်လာစေရန် ဒီrollerတုးံလေးနဲ့ လိမ့်ပေးခြင်းဖြင့် Collagen Proteinsများဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်
ဒီRollerတုးံလေးကို ဦးခေါင်း မျက်နှာ လည်ပင်း ဗိုက်ကြောပျက်ခြင်း ကိုယ်ခန္ဓာတခုလုးံ သုးံလို့ရပါတယ်
Stratum corneum မျက်နှာပြင်မှာ လိမ့်လိုက်တော Microconduits အလွန်မတန် သေးငယ်လှတဲ့ အပေါက်ကလေးတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ အရေပြားရဲ့ Epidermis (အပီထားမစ်) အလွှာကို မပျက်စီးစေပါဘူး။ ၁၅-၂ဝ ကြိမ်လုပ်တဲ့အခါ တစ်စင်တီမီတာကွက်တခုမှာ 250 holes/ cm2 အပေါက်လေးတွေ ဖြစ်လာစေပါတယ်။ Growth factors လို့ခေါ်တဲ့ အသစ်ကြီးထွားခြင်းမှာ အရေးပါတဲ့ Collagen သဘာဝ (ကိုလာဂျင်) ကို ထွက်လာစေပါတယ်။ Elastin (အလတ်စ်တင်) ဆိုတာလဲ Papillary dermis အလွှာမှာ ဖြစ်လာစေမယ်။ Capillaries (ကပယ်လရီ) သွေးကြောမျှင်လေးတွေပါ အသစ်ဖြစ်လာစေပါတယ်။
Derma Rollerတုးံကိုလိမ့်ပေးခြင်းသည် လေဆာကုထုးံများထက် ပို၍ထိရောက်ကောင်းမွန်သော ကုထုးံဖြစ်သည်
#မှတ်ချက် Rollerတုးံလေးနဲ့ လှိမ့်ပြီးသောအခါတွင် ရေခဲလေးအုပ်ပေးပါ တလတကြိမ်လောက် အသုးံပြုပေးပါ အသုးံမပြုခင် မျက်နှာကို အရင်သန့်စင်ပေးပါ အသုးံပြု ပြီးသောအခါတွင် အသားရည်သည် အသစ်ဖြစ်သောကြောင့် အရမ်းနုညံ့လှသည် ထိုကြောင့် rollerတုးံအသုးံပြု ပြီး ၂ရက်လောက် နေပူထဲထွက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ ထိုပြင် ၂ရက်အတွင်း မိတ်ကပ် နှင့် skin care တို့ထို၂ရက်အတွင်း အသုးံမပြု ပါနဲ့ ဝက်ခြံပေါက်နေချိန်တွင်လည်း ဒီrollerတုးံကို အသုးံပြု လို့မရပါဘူး မျက်နှာတဝိုက် တွင် နှုတ်ခမ်း မေးစေ့ မျက်လုးံအနီးတွင် ပြုလုပ်ချင်းရှောင်ပါ အောက်ပိုင်းအသုးံပြုလျှင် ခြေသလုးံအောက် ပြုလုပ်ချင်းရှောင်ပါ ပြု လုပ်မည့်နေရာကို အရင် အရက်ပျံသုတ်လိမ်းပြီးမှ ပြုလုပ်ပေးပါ
အရင်ဆုံးမျက်နှာသန့်စင်ပေးပြီး Rollerလေးနဲ့ ၁၅နစ် မိနစ်၂၀ လိမ့်ပေးပါ ပြီးရင် မျက်နှာကို ရေခဲအုပ်လေးအုပ်ပေးပါ
Topical Metronidazole (1%)
Metronidazole gel (.75%) ဒီဆေး၂မျိုးဆေးဆိုင်မှာဝယ်လို့ရပါတယ် တခုခုဝယ်p လိမ့်ပြီးသောအခါတွင် ပါးပါးလေးလိမ်းပေးပါ ကျန်တဲ့ မိတ်ကပ် skin careများ ၂ရက်အတွင်းမလိမ်းပါနှင့် Roller တုးံလေးကိုလည်း သုးံpရင် နောက်တခါပြန်သုးံလို့ရအောင် ရေနွေးလေးနဲ့ သန့်စင်p ဗူးလေးထဲ လေလုံအောင်ပြန် အုပ်ပေးထားပါ
Dermaroller ရဲ့ အသုံးပြုပုံ vedio file ကို အောက်ပါ link မှ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ရှင့်!
#ဈေးနှုန်း ၁၂၀၀၀ကျပ် (Cream မပါပါ)
Online Shopping in Myanmar (Burma)
Online Shopping in Yangon
Health, Household, Kitchen
Spine Massager – Posture and Back Support
Power Twister Exercise Ks10,000.00 Ks9,500.00
Clever Cutter - Discount Items Ks12,000.00 Ks4,000.00
Mighty Light - Promotion Ks8,000.00 Ks7,000.00
MicroTouch Max - Black Ks15,000.00 Ks7,000.00
Hurricane spin scrubber Ks30,000.00 Ks28,000.00
Dual Lens Car Blackbox Ks75,000.00 Ks47,000.00
Insta 360 One Ks459,000.00 Ks399,000.00
Garden Gloves Ks15,000.00 Ks8,000.00